104ml 120ml Vacuum Glass Fitehirizana Siny Hafanana mahatohitra siny fitaratra voaisy tombo-kase misy tombo-kase metaly
Tombo-kase tsy tambo isaina azo itokisana, tavoahangin-tsakafo vera Mason kalitao avo lenta, mahatohitra harafesina
Azo ampiharina ary tena mateza - ampiasaina isan'andro mandritra ny taona maro
Siny fitehirizana mazava ho an'ny famehezana sy fitehirizana tsy misy rivotra, rexing.
Sakafo azo antoka, siny tantely vera madio, tsy misy tsirony, hermetika, avo lenta.
Tsindrin-tsakafo misy sosona, jam, voankazo & legioma, sakafo crème, lasopy, salady & maro hafa
Tavoahangy Mason misy tavoara 500ml 17.5OZ siny fisotron-dronono misy mololo 6Pcs Tavoahangy fitehirizana vera ho an'ny ovy sy zava-pisotro mandritra ny alina Alefaso sarony 6 tsy misy rivotra
[Misy lavaka mololo ny sarom-bilany] ka azonao atao ny mampiasa siny vita amin'ny mason miaraka amin'ny mololo ho tavoahangy zava-pisotro, ary sarony 6 tsy misy loaka no mety tsara amin'ny fitahirizana jiro sy tsakitsaky.FANAMARIHANA: Tsy azo apetraka ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny vata fampangatsiahana ity Mason Jars ity!
[Siny Mason avo lenta]Ny siny fanangonam-bokatra dia vita amin'ny akora fitaratra vita amin'ny sakafo, tsy misy BPA ary azo ampiasaina indray.Ny siny fitaratra mangarahara dia ahafahanao mahita mora foana ny ao anatin'ireo siny ary mamaritra raha efa simba izy ireo.
[voaisy tombo-kase ary tsy misy leak] Siny mason 6 misy sarony dia azo ampiasaina amin'ny zava-pisotro, smoothie, cocktails, jams voatahiry na oats mandritra ny alina.Ny satroka visy dia manampy mba hahazoana antoka fa ny sakafonao dia mijanona ho vaovao ary tsy miparitaka.
[Mora ampiasaina sy diovina] Afaka mametraka voankazo sy legioma be dia be ny siny lehibe amin'ny vava.Mora miditra lalina ao anatiny sy madio.Fanasan-damba azo antoka.Aorian'ny fanadiovana dia maina ny sarony mba hisorohana ny harafesina.
[Betsaka] Ny siny fitehirizana dia tsy afaka misotro zava-pisotro fotsiny, fa mitahiry sakafo ihany koa.Mety amin'ny lanonana, trano, birao, trano fatoriana, fivarotana dite ronono sns, na entina raha mandehandeha, zarao amin'ny fifaliana.Fahaizana: 500ml (17.5 oz.).
Mason Jar Mugs misy sarony ambony Screw, mololo azo ampiasaina indray ary sarony fanampiny.Solomaso fisotroana Tena mety amin'ny fanaovana oats mandritra ny alina, smoothie, Cocktails, Picnics Pint 500ml 16oz Maison
IREO JARS MASON MISY MOFO SY NY LONGY IREO dia tsy tsara ho an'ny smoothie sy zava-pisotro ihany, fa koa ho an'ny OATS OVERNIGHT!Tsy toy ny siny smoothie hafa, izy ireo dia tonga miaraka amin'ny sarony sy ny mololo!Izy ireo dia azo antoka fa ny OPTION ENVIRONMENTAL ho an'ny zava-pisotro eny an-dalana!
VERY MATETIKA & TANJONA MAHASOA ARY KALITA TOKOA TOKOA NOHO NY SISA – Vita avy amin'ny vera mateza izay milanja 410g isaky ny vera mifanohitra amin'ireo mpifaninana izay milanja 360 grama kely fotsiny isaky ny vera.Tonga lafatra ho an'ireo kamo, andro fahavaratra mafana sy alina;ireto solomaso siny Smith's Mason ireto dia manasongadina ny endrika tampon'ny visy mahazatra sy ny tahony mety tsara, miantoka fa afaka mamihina mora foana ny zava-pisotro ianao, ary mifantoka amin'ny fialam-boly.
TSARA HO AN'NY zava-pisotro mahamamo - ireto kaopy fisotroana siny Mason ireto no fomba tsara indrindra hanolorana cocktails amin'ny fahavaratra, milkshakes mega ary dite gilasy!Mety ihany koa izy ireo amin'ny fitazonana zava-pisotro mafana toy ny kafe sy sôkôla mafana.Mety tsara amin'ny fanaterana zava-pisotro amin'ny lanonana zaridaina, BBQ ary fiarahan'ny fianakaviana!
MANOLOTRA GARANTIE 100% AZO AFAKA IZAHAY KA RAHA simba na vaky ny vokatra dia ho faly izahay hamerina na hanolo azy dia Mifandraisa mivantana aminay.Izahay dia olona tena mampiasa ny vokatray isan'andro.Manantena ny tsara indrindra ho an'ny fianakavianay izahay ary maniry izany ho anao.
Hexagonal Screw Sarom-bilany Glass Honey Jam Pickle Pasta Wedding Favor Mamy 730ml
Ny siny eto amintsika dia vita amin'ny vera mafy orina ary mety amin'ny fitehirizana ny karazan-tsakafo rehetra.
Tena ilaina ho an'ny mpankafy fialamboly na mpanamboatra matihanina na tantely, jams ary pickles raha tsy hilaza afa-tsy.
Misy amin'ny habe isan-karazany sy ny habe samihafa ho an'ny fihenam-bidy lehibe.
45ml: 5x4,5cm, 60ml: 5,5x5,5cm, 100ml: 8x5,5cm, 280ml: 9,5x7,5cm, 730ml: 12x11cm
95ml Custom voaisy tombo-kase mangarahara boribory boribory tantely ronono jam siny
* Ny siny tantely tsirairay misy sarony mainty izay vita amin'ny kalitao avo lenta, kristaly ambony indrindra, tsy misy poizina, tsy misy poizina, mba hiantohana ny fiarovana ny sakafo sy ny fahitana ambony indrindra ahafahanao mahafantatra ny ao anatiny.
* Ny sarom-bilany tafiditra dia mihidy mafy mba hisorohana ny fitetezana sy ny fitehirizana sakafo raha mbola mora misokatra sy mikatona, ny endrika malalaka vava dia manamora ny famenoana, mandamina lakozia sy trano milamina, mety amin'ny fotoana maro.
* Ny siny tsirairay dia tonga miaraka amin'ny fitambarana valin-drihana vita amin'ny rivotra efa nosedraina mba hiantohana ny tombo-kase kalitao miaraka amin'ny sarony tsirairay mba hahatonga azy ireo ho tonga lafatra ho an'ny fitehirizana sy fanangonam-bokatra.Azo antoka ho an'ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana, malalaka vava mora raisina sy madio, tsara ho an'ny fitehirizana sakafo, manamora ny fiainantsika andavanandro.
* Tonga lafatra ho an'ny fampakaram-bady, fanasana fanasana fety na fanomezana hafa vita an-trano, zava-manitra, anana, mofomamy, tsakitsaky, vatomamy, zava-pisotro, vovoka, tantely sy ny maro hafa!Andramo mameno sira fandroana, dibera amin'ny vatana, voanjo, bokotra, vakana, lotions, huile essentielle sy ny maro hafa! tsara ho an'ny fanangonam-bozaka koa, manaova pickles anao manokana.
* BPA maimaim-poana 100% sakafo azo antoka amin'ny vera sy fanasana vilia.Ity siny fitaratra ity dia vita amin'ny vera maharitra avo lenta, fitaovana azo antoka amin'ny sakafo, natao ho an'ny fanamorana anao, fanadiovana mora.
Tavoahangy mason'ny vera tsy tapaka 17 oz Tavoahangy vera mazava miaraka amin'ny tafo metaly volafotsy ho an'ny famehezana tavoara ho an'ny fitahirizana sakafo 4PACK
【SERVICE AORIAN'NY VIDEO】 100% ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa: Raha toa ka tsy afa-po tanteraka amin'ny fividiananao ianao, dia ho faly izahay hanome anao ny safidinao amin'ny fanoloana na famerenana. ny mpanjifa mba ho tia azy ireo tahaka ny ataontsika!
【Varatra mazava】 Siny vera avo lenta avo lenta avo lenta misy sarony volafotsy - siny fitaratra 4 17 OZ vita amin'ny siny fitaratra vita amin'ny visy volafotsy, izay vita amin'ny fitaovana avo lenta indrindra ho an'ny faharetana sy fanamorana.
【Fiomanana Canning & Meal】 Tonga lafatra amin'ny fitehirizana sy ny mpankafy am-bifotsy;Ity siny fanangonam-bokatra ity dia miendrika sy habe ho an'ny fanangonam-bokatra an-trano, paiso, poivre, jams, jellies, voatahiry, saosy voatabia, salsa, ron-kena, ary karazany hafa.Tsara ho an'ny fanomanana sakafo sy fandraisana sakafo eny an-dalana toy ny salady, voankazo voatetika ary parfaits.
【Classic & Elegant】Ny siny fitaratra dia manana endrika kanto ary ny fitaratra mangarahara dia afaka manavaka tsara ny ao anatiny.Ny sarony tsirairay dia novolavolaina tsara amin'ny fampiasana mora sy fiarovana amin'ny fitahirizana ao an-tsaina;asiana tombo-kase tsara ireo sarony tafiditra mba hisorohana ny fitetezana sy hitehirizana sakafo raha mbola mora misokatra sy mihidy.
【Fitandremana amin'ny fampiasana】Ny fanitarana sy ny fihenan'ny hafanana noho ny tsy fahampian'ny hafanana mafana amin'ny vera. Noho izany, rehefa manondraka rano mangotraka ao anaty vera amin'ny ririnina, dia tsara kokoa ny manondraka kely kokoa ary manozongozona azy imbetsaka, mba ho mafana ny vera. , mba tsy ho vaky ny vera.Ny sarony tsy misy rivotra dia tsipika tsy misy BPA ho an'ny tombo-kase mafy izay mitazona ny sakafo ho vaovao.Ny firafitry ny fitaratra mateza, voatsabo amin'ny hafanana, dia azo ampiasaina amin'ny fanasana sy fanasana vilia, fa tsy amin'ny lafaoro microwave, sterilizer ary grills.
1.5oz 45ml Cylinder Foana Sakafo Kaviar Jam Fitahirizana fitaratra siny misy sarony volafotsy
1.5oz Cylinder Foana Sakafo Caviar Jam Glass Fitehirizana Siny misy Sarony Volafotsy
1) vita amin'ny vera avo lenta, vava tavoahangy savaivony mora raisina amin'ny endrika tsara tarehy.
Vidin'ny orinasa 55ml 80ml 115ml 145ml Round Storage Glass Jar ho an'ny fitahirizana sakafo
*Vatana tavoahangy avo lenta, azo antoka sy madio, miaro ny sakafo ao anaty tavoahangy tsy hiharatsy mandritra ny fotoana maharitra.
* Fitsaboana fanamafisam-peo amin'ny tavoahangy ambany kokoa, mahatohitra kokoa, tsy misy akora manimba, fiarovana amin'ny harafesina, mahatohitra, azo antoka ny fampiasana.
* Ny vavan'ny tavoahangy dia natao tamin'ny tavoahangy lehibe iray, izay mety amin'ny famenoana sy mety amin'ny fanadiovana.
* Tsara tarehy, azo ampiharina ao anatiny, mora entina.
* Satroka vy vy, manome satroka aluminium, satroka plastika, sarony volotsangana, sarony tsy misy zaza ho an'ny safidinao.
Ny lakozia dia mampiasa tavoahangin-tavoahangy fitaratra fitehirizana sakafo mahazatra ho an'ny ambongadiny
Famolavolana manokana siny fitahirizana vera tsy misy na inona na inona miaraka amin'ny satroka screw ho an'ny fampiasana lakozia
Square Jam na Chutney Jars Black Lids 200ml
Endriny tsara tarehy miaraka amin'ny sarony mainty mangirana
Fenoy chutney vita an-trano, saosy, jam ary voatahiry
Fahaizan'ny siny tsirairay: 200ml (mihoatra ny 7 fl oz)
Sarony tsy misy vinaingitra
Tavoahangy vera 100ml misy sarony mainty tsara Tavoahangy vera kely ho an'ny Pudding yaourt
BPA Free & Sakafo azo antoka - ny siny fitaratra dia vita amin'ny vera matevina avo lenta izay tsy misy poizina.
Leak Proof sy Airtight - Ny siny fitaratra kely tsirairay dia manana sarony mainty tsara tarehy voaisy tombo-kase ka mety tsara amin'ny fitahirizana sakafo.
Ny habe mahafatifaty dia tena mora entina.Tonga lafatra amin'ny fikarakarana hoditra, menaka fanorana, anana ary zava-manitra sns.
Lafaoro, Microwave ary fanasana vilia azo antoka - azonao atao ny mametraka mivantana ireo siny fitaratra ireo ao anaty microwave, fa azafady esory aloha ny sarony.
Kendrenay ny hanome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay, miangavy anao hividy amim-pahatokiana!
tavoahangy ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy vera labiera, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy diffuser volotara, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo,